ဆုံဆည်းရာ: လမ်းတစ်ချောင်းရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း
မိဘအမည်........................................ ဘယ်ခြေဖဝါးနဲ့ ညာခြေဖဝါး
မွေးဇာတိ.......................................... လူသားရဲ့ ခြေအောက်တည့်တည့်
နေရပ်လိပ်စာ..................................... အတည်အကျမရှိ (အပြောင်းအရွှေ့များ)
အိမ်ထောင်........................................ ရှိလိုက်၊ မရှိလိုက်
လက်ရှိအခြေအနေ.............................. ဖုန်းဆိုးမြေထဲမှာ ဖြတ်သန်းဆဲ
အနာဂတ်အစီအစဉ်..............................အခြားဂြိုလ်များသို့ခရီးစဉ်၊ လမ်းယဉ်ကျေးမှုနှင့် လမ်းမျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေး၊ ခရီးစဉ် (၁) လကမ္ဘာသို့။
အတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်သက်......................အာဒမ်နဲ့ဧဝ ကို တွေ့ဆုံပေးနိုင်ခဲ့။ ပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှာ လူ၊ လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ အမုန်းတရား စတာတွေကို ဟိုပို့ ဒီပို့ လုပ်ပေးမိခဲ့။ ယနေ့ထိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတာဝန်ကို ယူထားဆဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ လုံခြုံရေးယူခဲ့။ တစ်ဖက်မှာလည်း စစ်ပေါင်းများစွာရဲ့ အနိုင်ကျင့်မှုကို ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့။ သိပ်များတယ်။
P.S. ။ ။ ကမ္ဘာပတ်နေတဲ့ ဟိုင်းဝေးတစ်ခုအနေနဲ့ သမုဒ္ဒရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားမလဲ မေးကြည့်တော့ လမ်းက အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ "ကျနော်တို့လမ်းတွေမှာ ဒီစီမံချက်က ရှိပြီးသားပါ၊ သမုဒ္ဒရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ကျနော်တို့ဟာ သင်္ဘောကြီးတွေ၊ လေယာဉ်ကြီးတွေ အယောင်ဆောင်ပြီး ခရီးဆက်ရပါမယ်၊ ယာယီအားဖြင့် လမ်းရဲ့အဘိဓမ္မာ ခဏပျောက်သွားပေမဲ့ တစ်ဖက်ကုန်းမြေ ရောက်တဲ့အခါ လမ်းဟာလမ်းပဲ ပြန်ဖြစ်မှာပါ၊ ဒီအတွက် ကျနော်တို့ လမ်းအမျိုးအနွယ်တစ်ချို့ရဲ့ "လမ်းသည် အမြဲတမ်း လမ်းဖြစ်ရမည်" ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အစွဲကို ချွတ်ရပါမယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ခရီးဆက်ခဲ့တာ အခုတောင် တော်တော် ခရီးပေါက်ခဲ့ပါပြီ" ။
P.P.S. ။ ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လူသားရယ် ကမ္ဘာမြေရယ်ကို တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနေရတဲ့ လမ်းအနေနဲ့ ဘာပြောချင်သေးသလဲလို့မေးတော့ အခုလို ဖြေခဲ့ပါတယ်။ "လိုရာကို ရောက်အောင်သွားကြမဲ့ လူတွေကလည်း ရောက်အောင်သွားကြပေါ့။ နားချင်သူတွေကလည်း နားကြပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းကတော့ ကူညီပေးဆပ်နေမှာပါ။ လမ်းကိုယ်တိုင်လည်း ချီတက်နေရတုန်းပါပဲ။ လူသားနဲ့ ကမ္ဘာမြေအတွက်ဆို လမ်းရဲ့ ကျောကုန်းကြီးတစ်ခုလုံး ပေါက်ပြဲစုတ်ပြတ်သွားပါစေဦး၊ လမ်းကတော့ ကျေနပ် ဂုဏ်ယူနေမှာပါပဲ။ လမ်းဆိုတာ မကုန်ဆုံးတတ်တဲ့ (အဆုံးတစ်ခုနဲ့)၊ မကုန်ဆုံးတတ်တဲ့ (အပြုံးတစ်ခုနဲ့) တစ်သက်လုံး ရုန်းကန်ချီတက်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" ။ ။
Posted by A'karikz Yannaing at 5:04 PM